ERW ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက် - တရုတ်ထ (Tianjin) သံမဏိအရောင်း
1. အခြေခံပညာထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ERW ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက် 2, ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် attribute: ထလော့-သံမဏိမော်ဒယ်: API ကို 5L, API ကို 5CT, ASTM 53, EN10217 Din 2458. , 3589 IS, JIS ဘီ G3452, စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း၏ BS1387 လက်မှတ်: API ကို TSG ISO9001 ISO14001 CCEC မူလအစ: Heibei, တရုတ် 3. စိတ်တိုင်းကျ attribute: ERW ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက်အခြေခံအဆောက်အဦးအစိတ်အပိုင်းမျိုး, စိတျအပိုငျး, အရည်ထုတ်လွှင့်ပိုက်သံမဏိအဆင့် BS များအတွက်: 1387, EN10217: S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H , St12, St13 ။ ASTM တစ်ဦးက 53: ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ တစ်ဦးက, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း B က, G ...
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ERW ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက်
မော်ဒယ်: API ကို 5L, API ကို 5CT, ASTM 53, EN10217 Din 2458. , 3589 IS, JIS ဘီ G3452, BS1387
စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း၏လက်မှတ်: API ကို TSG ISO9001 ISO14001 CCEC
မူလအစ: Heibei, တရုတ်
အခြေခံအဆောက်အဦးအစိတ်အပိုင်းမျိုးများအတွက် ERW ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက်, စိတျအပိုငျး, အရည်ထုတ်လွှင့်ပိုက်
BS: 1387, EN10217: S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H, St12, St13 ။
ASTM တစ်ဦးက 53: ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ တစ်ဦးက, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း B, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းက C, Gr.D
API ကို 5L: A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 X70
GB ကို / T9711: L175, L210, L245, L290, L320, L360, L290, L320, L360, L390, L415 ။
GB ကို / T3091, SY / T5037, SY / T က 5040, CJ / T က 3022: Q195, Q215, Q235, Q275, Q295, Q345,
ပြင်အချင်း: 6mm-610mm (1/16 "-24")
အဆုံး: စတုရန်းကြီးစွန်းတိုင်အောင် (ဖြောင့်ဖြတ်ဖြတ်နှင့်မီးရှူးတိုင်ကို cut ကိုမြင်လျှင်) ။ သို့မဟုတ်အဘို့အ beveled ။
ငွေပေးချေမှုရမည့်: (။ ကြိုတင်မဲ 30deposit အတွက်မျက်မှောက်မှာ copyB / L ကိုသို့မဟုတ် L / C ကိုဆန့်ကျင် 70balance 100irrevvicabe) T / T
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်: 10000 တန်
Delivery အချိန်: 10- 30days
သမားရိုးကျထုပ်ပိုး: PVC အဝတ် / အစုအဝေးကို / ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကို
ကုန်ပစ္စည်းအမည်ဖြင့် ERW ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက်
တင်ပို့ခြင်းနှင့်ကျပန်းအရှည်အဘို့, ယေဘုယျအားဖြင့် 20ft ကွန်တိန်နာအဘို့, 5-5.8meters
အရှည်, ယေဘုယျအားဖြင့် 6-12M တင်ပို့ခြင်းနှင့် fixed အဘို့, 40ft ကွန်တိန်နာများအတွက်
ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြနှုန်းအဖြစ်, 5.8m,6လ 11.8M တူသောအရှည် fixed နိုငျသညျ။
ပစ္စည်း BS: 1387, EN10217: S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H, St12 ။
စံ BS 1387 BS, EN10296, BS EN10025, BS EN10219, JIS ဘီ G3452-2004, JIS ဘီ G3445-2006, JIS ဘီ G3444-2006, JIS ဘီ G3456-2004, Din 17175, Din 2448, Din 2444, ASTM A53-2007, ASTM A671- 2006, ASTM A53M-2007, API ကို 5L
မျက်နှာပြင်က Black ပန်းချီ, အရောင်တင်ဆီသုတ်ဆေး, ဆန့်ကျင်သံချေးရေနံ, ပူသွပ်ရည်စိမ်, သွပ်ရည်စိမ်အအေး, 3PE, etc
သတ္တုများပုံသွန်းများအတွက်အသုံးပြုလျှောက်လွှာ, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဘို့အလိုင်းပိုက်, အခြေခံအဆောက်အဦးပိုက်, ရေ, ပျော့ဖတ်များသို့မဟုတ်အခြား fuid လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်လည်းဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, အဆောက်အဦနှင့်အာဏာအင်ဂျင်နီယာ
နှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းပေါ်ပလတ်စတစ်ထုပ်, သံမဏိအစုအဝေးကိုယက်အိတ်သို့မဟုတ် ACC ထုပ်ပိုး။ customers'request မှ
ISO4001 လက်မှတ် ISO9001, API ကို,
အချိန် delivery နှင့်ဝယ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှ prompt ကိုတုန့်ပြန်တွင်ဖြန့်ဝေအချိန်
ကွန်တိန်နာဖြင့်သို့မဟုတ် breakbulk ရေယာဉ်တို့ကတင်ပို့
စွမ်းဆောင်ရည် 250000 တန်ချိန် / တစ်နှစ်လျှင်
2. လမျးဖွောငျ့ချုပ်ရိုး welded သံမဏိပိုက် (ERW / LSAW)
3. ခရုသံမဏိပိုက် (SSAW) welded
5. PE အပေါ်ယံပိုင်းသံမဏိပိုက်
6. ပိုက် fittings: တံတောင်ဆစ်, Tee, လျှော့ချ, အနားကွပ်, etc
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စျေးနှုန်း 1. ကောင်းကျိုးများ
2. အလြှံပစတော့ရှယ်ယာနှင့်အ prompt ကိုဖြန့်ဝေ
3. Rich ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပို့ကုန်အတွေ့အကြုံ, စိတ်ရင်းဝန်ဆောင်မှု
2-နာရီကွာ port မှ 4. ယုံကြည်စိတ်ချရသော နေ့မှစ. ၎င်း, ။
ယခင်: ERW Coating ပိုက်
နောက်တစ်ခု: LSAW ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက်
8 မီလီမီတာ Y ကို Tee ပိုက်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်
Black က Square ကိုပိုက်
ကာဗွန် Erw သံမဏိပိုက်တည်ဆောက်မည်
စံ PPR ပိုက် Fittings din
နှစ်ချက် Submerged Arc ဂဟေသံမဏိပိုက်
Erw က Round ဖွဲ့စည်းပုံပိုက်
Erw ရင်ပြင်ဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိ Tube
Erw ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ Square ကိုသံမဏိပိုက်
Erw ဖွဲ့စည်းပုံ Square ကိုသံမဏိ ပိုက်
သွပ်ရည်စိမ် Cast ကိုသံပိုက် Fittings
သွပ်ရည်စိမ် Erw ကာဗွန်သံမဏိပိုက်
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Rectangle သံမဏိပိုက်
hot Dip သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိပိုက်
ပျော့သံပိုက် Fittings ISO
PPR ပိုက် Fittings အရွယ်အစားများစာရင်း
အခြေခံအဆောက်အဦး Erw ဂဟေသံမဏိပိုက်
ရေ Delivery ပိုက်
ရေနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း PPR ပိုက် Fittings
welded ပိုက် Fittings
welded သံမဏိ Tube
Y က Tee ပိုက်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်